Kitapom-baravarana mihidy varavarana mombamomba an'i Sina ho an'ny fanamboarana sy fanamboarana varavarana anatiny | YALIS
Kitapo ho an'ny varavarana anatiny ho an'ny varavarana anatiny
Famaranana mahazatra: matt mainty sy mainty, matt mainty sy fotsy
Ampiharo ny hidin'ny vavahady minimalista YALIS amin'ny varavarana tsy hita maso, varavarana avo amin'ny valindrihana, mba hanitarana tanteraka ny tombony amin'ny varavarana, hamaky ny fatorana nentim-paharazana, ary hanasongadinana ny fahatsapana endrika tsy manam-petra amin'ny famolavolana trano ankapobeny amin'ny toerana voafetra.
Ny tantana am-baravarana dia vita amin'ny firaka aliminioma, izay afaka mamita ny endriny mitovy amin'ny vatan'ny varavarana alimina mba hampitomboana ny fijerin'ny trano amin'ny ankapobeny. Ny fampidirana ny tantaram-baravarana minimalista dia azo atao amin'ny fitaovana mitovy amin'ny ambonin'ny varavarana, izay mahatonga azy io ho lasa fitambarana tonga lafatra amin'ny varavarana.
Rafitra fanokafana fanoherana herisetra
Ny MULTIPLICITY dia manana patanty amin'ny fanokafana fanoherana herisetra. Ny zoro fanokafana dia 23 °, izay afaka misoroka tsara ny tahony tsy hihantona ary hiaro ny filaminan'ny fianakaviana.
Lock Locking andriamby
Ny fitsapana ny tsingerin'ny hidin-trano fonenan'ny andriamby dia nahatratra in-200 000 mahery izay miantoka ny fampiasana maharitra. Ary ny tranga fitokonana azo ovaina dia mahatonga ny fametrahana mora kokoa. Ny fametahana firaka zinc miaraka amin'ny tanany misy nylon eo ivelany, dia mety hahatonga ny fanokafana sy ny fanidiana azy tsara ary hampihena ny fanelingelenana amin'ny tabataba.
YALIS dia mihevitra ny vokatra ho toy ny asany, ary fantany fa ny traikefa no hany lakilen'ny dingana. Amin'ny fironana ankapobeny amin'ny fanaingoana trano iray manontolo, YALIS dia manenjika ny firaisan'ny fomba ao an-trano. MULTIPLICITY, mamela ny varavarana mifampitantana sy ny varavarana mifameno.
Teo aloha: Mpamatsy varavarana Minimalista avo lenta
Manaraka: Famolavolana Minimalista anatiny ho an'ny vavahady profil
Mpamatsy varavarana Minimalista avo lenta